Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Doorashooyinka Qaran oo xilka laga qaadey
Sayid Cali Sheekh Maxamed, gudoomiye ku xigeenkii Guddiga ee xilka laga qaadey [Sawir hore]
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa xilka qaadis lagu sameeyay, isla mar ahaanta ka saaray xubinnimada Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Doorashooyinka heer qaran, Sayid Cali Sheekh Maxamed.
Tallaadabadan ay ka dambeysay kadib markii Xaliimo Yareey oo ah ah gudoomiyaha Guddiga Xaliimo Yareey ay dacwado ka gudbisay ku xigeenkeeda, Sayid Cali oo ay ku eedeysay inuu maleegayay inuu dumiyo guddiga.
"Sharciga guddiga lagu dhisay ee Sharci Lr.04. Qodobkiisa 10aad. ayaa guddiga awood u siinaya in uu xilka ka qaadi karo xubin ka mid ah haddii ay jebisa sharciga guddiga. Dacwadaha ka dhasha go'aankan guddiga ayaa waxaa kaliya go'aan ka gaari kara maxkamadda sare ee dalka," ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Guddiga.
Kiiskan ayaa soo socday muddo lix bilood ah, waxana gabagabadii guddigu soo saareen go'aan ay ku caddaynayan in ay xilka iyo xubinnimada labadaba ka qaadeen Sayid Cali.
Guddiga doorashooyinka oo ka kooban sagaal xubnood ayaa la aasaasay April 2, 2015. Go'aankan cayrinta xubinta guddiga ayaa ah kii u horreeyey guddigu ku qaado xubin ka tirsan.
Madaxweynaha Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Khayre, Wasiirka arrimaha gudaha, Gudoomiyaha Maxkamadda sare iyo labada gudoon ee Gollaha shacabka iyo Aqalka Sare ayaa la ogeysiiyay go'aanka shaqada looga eryay mas'uulkan.
Xaliimo Yarey ayaa lagu eedeeyay inay Guddiga ku hogaamin waysay howlihii loo dhisay, iyadoo ka gaabisay shaqooyin culus oo horyaalla, waxaana waxqabadkeeda ku kooban yahay diiwaangelinta Xisbiyo siyaasadeed.
Farmaajo oo daah furay wajigii 2-aad ee Manhajka Dugsiyada Dalka
Soomaliya 14.12.2019. 13:57
Axmed Cali Daahir oo dalbaday "cafis" xili uu xilka wareejiyey
Soomaliya 02.12.2019. 18:00
Japan oo ka taageereysa Soomaaliya xal u helida fatahaadaha Webiyadda
Soomaliya 21.11.2019. 15:25
Yariisow oo lagu xusayo baroor-diiq iyo Calanka oo hoos loo dhigayo
Soomaliya 01.08.2019. 17:00
Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika oo ka degay Muqdisho
Soomaliya 20.07.2019. 10:18